Guddoomiyaha Luuq: “Saddex Carruur ayaa haraad u geeriyootay”. | Dayniile.com
Home Warkii Guddoomiyaha Luuq: “Saddex Carruur ayaa haraad u geeriyootay”.
Cali Kediye Maxamed Guddoomiyaha Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in xaalad abaar oo sababtay geerida saddex carruur ay ka jirto Gobolkaas oo martigeliyay qoysas isaga barakacay Gobollada Bay & Bakool.
Guddoomiyaha Luuq ayaa tilmaamay in xaalad halis ah ay wajahayaan Kumanaan ruux oo ku sugan Degmooyinka Gobolka Gedo, Hay’adaha samafalka & Xukuumadda Federaalka ayuu Cali Kediye sheegay in kaalintooda meesha ka baxday.
“Dhimashadu waxa ay mareysaa saddex ruux, Dadkaan oo ah reer Miyi ayaa dhex kusoo dhintay, qoysaska degen inta u dhaxeysa Garbahaarey & Luuq waxaa heysa abaar daran oo saameyn xooggan ku reebtay Noloshooda, keliya waxa ay qoysaskaan u baahan yihiin gurmad degdeg ah” Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Guddoomiyaha Luuq.
Cali Kediya Maxamed Guddoomiyaha Degmada Luuq ayaa Hay’adaha Samafalka ee fadhigoodu yahay Gobolka Gedo ku eedeeyay in ay isku mashquulinayaan xog raadinta Dadka Abaartu saameysay ee Macluumaadkooda Muuqda.
Xukuumadda Federaalka waxa uu ka codsaday in ay si degdeg ah uga jawaabto si loo badbaadiyo nolosha boqolaalka ruux ee haraadka & Cunno la’aanta ku heysata Gobolka Gedo ee DG Jubbaland.
“Dowladda Federaalka waan gaarsiinay Cabashada & Qaylo dhaanta oo waan soo jawaabeynaa ayay leedahay balse wax falcelin ah kama sameyn arrintaan, Hay’adaha Degenaa deegaanka waan u gudbinay, qof weliba waxa uu leeyahay waan soo soconaa Laakiin arrintu waa mid halis ah” ayuu hadalkiisa kusii daray Guddoomiyaha Luuq.
Cali Kediye Guddoomiyaha Luuq ayaa caafimaad ahaan ka digay cabista Ceelasha Biyaha oo midab & dhadhan ahaan is badelay, meesha keliya ee la doorbiday ay tahay Webiga oo aan isaga qudhiisa la hubin badqabkiisa.
Previous articleAl-Shabaab oo saldhigga ciidamada JUBBALAND ka qaadatay Hub tiro badan
Next articleMAAMULKA PUNTLAND OO DIB U DEJIN U SAMAYSAY DADKII SOMALILAND SOO BARAKICISAY
Ciraaqiyiinta ayaa u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka oo la qabanayo xilli hore si ay uga jawaabto mudaaharaadyo ballaaran oo qarxay laba sano ka...
Mareykanka Iyo Kenya Oo Kulan Ka Yeelanaya Arrimaha Amniga Dalal Ay...